स्टेडियमबाट अर्जेन्टिनाको खेल हेर्दा: खुट्टामा बल पर्नासाथ गुन्जिन्थ्याे मेस्सी...! मेस्सी...!! - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
उदीप बराल असार ७
अर्जेन्टिना र अाइसल्याण्डबीचको खेल चलिरहदा स्टेडियममा उदीप बराल
नेपालमा जेब्रा क्रसिङमा गाडीहरु रोकिएपछि पैदल यात्रुले बाटो काट्नुपर्छ। रुसमा भने जेब्रा क्रसिङबाट जतिबेला पनि यात्रुहरु बाटो काट्न पाउँछन्। यात्रुहरु बाटो काट्न थालेपछि गाडीहरु आफैँ राेकिँदा रहेछन्।
म पनि विश्वकपलाई लिएर उत्तिकै रामाञ्चित थिए। बाल्यकालदेखि टिभी, प्रोजेक्टरमा हेर्दै आएको विश्वकपको यसपटक भने म प्रत्यक्ष अनुभव लिदैँ थिए। त्यसैले उत्साह अझै बढी थियो।
विश्वकप प्रत्यक्ष हेर्न अवसर कोकाकोलाले जुराई दिएको थियो। कोकको ‘कोक खाउँ रसिया जाउँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत कोक खादाँ रसिया टुरको अफर पाउने भाग्यमानीहरु मध्ये म एक थिएँ। जेठ १ गते हामी रसिया जाने भएका थियौं। अर्जेन्टिना अर्थात् विश्वका स्टार खेलाडी लिओनल मेस्सीको आइसल्याण्डविरुद्धको खेल हेर्न रसिया जाने भएपछि हामी एकदमै उत्साहित थियौं।
हाम्रो २९ जनाको टोली थियो। २० जना टूरका लागि छनोट भएका, एक जना गाइड र बाँकी कोकका स्टाफ। त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट हामी दोहा ट्रान्जिट हुँदै रसिया पुगेका थियौं। होटलपुग्दा त्यस्तै रातिको १२ बजेको थियो। हामी बस्ने होटेल त्यहाँको चार तारे रैछ। नेपालको साततारे भन्दा माथि भने हुने खालकाे। सबै व्यवस्थापन कोकले मिलाएकाले हामीलाई केही गाह्रो अप्ठारो थिएन। त्यस रात हामीले आराम गर्यौ। अर्को दिन हामीले खेल हेर्न जानु थियो।
भोलिपल्ट बिहान हामीले चिया नास्ता खाएपछि केहीबेर घुमफिर गर्यौ। रसियामा विश्वकपको माहौल हेर्यौ। आयोजक राष्ट्रलाई विश्वकप गज्जब लागेकाे रहेछ। उनीहरुको व्यवस्थापन निकै चुस्त थियो। हरेक कुराका लागि पहिले नै योजना बनाएका थिए। विमानस्थलदेखि नै ठाउँठाउँमा हेल्प डेक्सहरु थिए। कसैलाई केही समस्या भए उनीहरुले मिठो मुस्कान सहित सहयोग गर्न आइपुग्थे।
सुरक्षा व्यवस्था पनि निकै चुस्त थियो। ठाउँठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरु खटिएका भेटिन्थे। हामी फ्यान आइडी भएकालाई भने सजिलो थियो। यो आइडी देखाएपछि हामीमाथि धेरै केरकार पनि हुदैँनथ्यो। यस्तै मेट्रो लगायतमा पनि छुटको व्यवस्था थियो।
मस्को स्थित स्पार्टक स्टेडियममा त्यहाँको समयअनुसार दिउँसो ४ बजे अर्जेन्टिनाले आइसल्याण्डसँग पहिलो खेल खेल्दै थियो। हामीहरु बिहान घुमफिर गरेर होटल फर्कियाैं। खाना खायौं। स्टेडियमका लागि निक्लियौं। हाम्रो होटलदेखि स्टेडियमसम्म जान गाडीमा त्यस्तै १ घन्टाजति लाग्थ्यो। बाटोभरि हामी माहाेल हेर्दै गयौं। विश्वकपले गर्दा पनि होला त्यहाँको ट्राफिक जाम छिचोल्दै हामी अघि बढिरहेका थियौं।
रुसको जेब्रा क्रसिङ र नेपालको जेब्रा क्रसिङमा भने ठिक उल्टो रहेछ। नेपालमा जेब्रा क्रसिङमा गाडीहरु रोकिएपछि पैदाल यात्रुहरुले बाटो काट्नुपर्छ। रुसमा भने जेब्रा क्रसिङबाट जतिबेला पनि यात्रुहरु बाटो काट्न पाउँछन्। यात्रुहरु बाटो काट्न थालेपछि गाडीहरु आफैँ राेकिँदा रहेछन्।
स्टेडियम भन्दा करिब एक किलोमिटरको दुरीमा पार्किङ बनाइएको थियो। पार्किङबाट हामी हिँड्दै, गफिँदै, फोटो खिच्दै रोमाञ्चित मुडमा स्टेडियम पुग्यौं। स्टेडियम भव्य थियो। कहाँ कता जाने भनेर त्यहाँ निर्देशनहरु लेखिएका थिए। प्रर्याप्त स्वयंसेवकहरु पनि खटाइएका थिए। हामी कहीँ अलमलिनु परेन्। हाम्रा लागि सिटहरु पूर्वनिर्धारित थिए। जुन स्टेडियमको मध्यभागमा थियो। जहाँबाट मैदानको सबै दृश्य मज्जैले देखिन्थ्यो।
स्टेडियममा पनि रुसले दर्शकहरुलाई कुनै किसिमको अप्ठारो नपरोस भनेर सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाएको थियो। प्रर्याप्त स्वयमसेवक खटाइएका थिए। उनीहरुले कसैलाई केही कुराको आवश्यकता पर्दा या समस्या पर्दा तत्काल सहयोग गर्थे। स्टेडियम प्रायः अर्जेन्टिनी समर्थकहरुबाट भरिएको थियो। आइसल्याण्ड पहिलोचोटी विश्वकप खेल्दै थियो। ३ लाख ३४ हजारमात्रै जनसंख्या भएको यो मुलुका समर्थक पनि केही हजारमात्रै थिए। हामी पनि लगभग सबै अर्जेन्टिनाका समर्थक थियौं। नेपाली झन्डासहित हामीले मेस्सी र अर्जेन्टिनाको नाममा हुटिङ सुरु गर्यौं।
खेल सुरु हुने समय भयो। दुबै टोलीका खेलाडीहरु विस्तारै मैदान प्रवेश गरे। मेरा नजर आधुनिक फुटबलका सर्वकालिन महान फुटबलर मेस्सीलाई प्रत्यक्ष देख्न बेचैन थिए। बालकको हात समात्दै खेलाडीको लहरको अगाडिबाट मेस्सी मैदान प्रवेश गरे। स्टेडियम उनको नामले गुञ्जिएमान भयो। मेरोे मुखबाटबाट मेस्सी... मेस्सी... आफैँ निस्कन थाल्यो। निरन्तर आँखाले उनलाई पछ्याइरह्यो। सपनामा छु, कि झै पनि लाग्दै थियो।
खेल सुरु भयो। मेस्सी र अर्जेन्टिनाका समर्थहरु नै स्टेडियममा हाबी थिए। मेस्सीले बल पाउने वित्तिकै स्टेडियम उनकै नाम गुञ्जिन्थ्यो। उनको रफ्तार र खेल्ने शैलीको त दुनियाँ कायल थियो। अझै सर्जियो अग्युरोले सुरुवाती अग्रता दिलाएपछि भने अर्जेन्टेनी समर्थकहरुको आवाज अझै ठूलो बनेको थियो।
तर चार मिनेट बित्न नपाउँदै अर्जेन्टिनी खेमा शान्त भयो। कारण थियो, फिन्बोगोसनको गोल। आइसल्याण्डका लागि उनले बराबरी गोल फर्काएका थिए। विश्वकपमा अर्जेन्टिनाका लागि बराबरी गोल फर्काएपछि समर्थकहरुको खुशीको सिमा रहेन। उनीहरुको ताली बजाउने शैली नै विशेष किसिमको थियो। जसले स्टेडियमको माहाेल नै रंगीन बनाइदियो।
पहिलो हाफ हेर्दा निकै उत्साहित भए पनि दोस्रो हाफमा भने खेल त्यति रोचक लागेन्। मेस्सीले अर्जेन्टिनाका लागि कतिबेला गोल गर्छन् भन्ने आशामा सबै थिए। तर उनी बारम्बार फ्रिकिकमा चुकिरहेका थिए भने पछि पेनाल्टीमा पनि सफल हुन् सकेनन्। ६३औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीजस्तो सुनौलो मौका उनले खेर फाले। जसले स्टेडियममा उपस्थित अर्जेन्टिनी समर्थकहरुलाई स्तब्ध बनायाे। पहिलो चोटी अर्जेन्टिनाकाे खेल हेर्न पुगेको मैले पनि उनले पेनाल्टी मिस गरेकाे प्रत्यक्ष देखेँ। नमज्जा लाग्याे।
मैले सोचेको मेस्सी र उनले गरेको प्रदर्शनमा फरक देखिएको थियो। उनको प्रदर्शनले मलाई चित्त बुझेको थिएन। मलाई अपसेटमात्र बनाएको थियो। टेलिभिजनमा हामीले पछ्याउने मेस्सी त बल पाउने वित्तिकै तीव्र गतिमा कुद्दै गोल ठोकेर फर्किन्थे। उनका प्रहारहरु सटिक हुन्थे। फ्रिकिकहरु निशानामा लाग्थे। हरेक खेलमा गोल गर्ने जादुयी क्षमता उनमा थियो। उनको सेलिब्रेसनमा सबै झुम्थे।
तर, प्रत्यक्ष देख्दा भने उनको जादु हेर्न पाइएन्। सायद अर्जेन्टिनाबाट खेल्दा विश्वकप जित्न नसकेको दबाब उनमा थियो। पहिलो खेल भएकाले पनि होला उनी आफूलाई जोगाएर खेलिरहेका थिए। ता कि आगामी खेलहरु चोट लागेका कारण खेल्न नसकिने नभइयोस। अनि आइसल्याण्डका खेलाडीहरुले उनलाई खेलअबधि भर नै बाँधेर राखे। उनीहरु आफ्नो खेलमा कम ध्यान दिएको र मेस्सीलाई रोक्न बढी केन्द्रित भएकाले पनि मेस्सी खुलेर खेल्न नसकेका हुन झै लाग्थ्यो।
पेनाल्टी चुक्दा मेस्सी आफैँ पनि निराश थिए। कमजोर भनिएको टोलीविरुद्ध पनि जित हात पार्न नसकेपछि समर्थकहरुसँगै हामी पनि खल्लो महसुस गर्दै मैदानबाट बाहिरिएका थियौं। खेल जे जसो भएपनि जीवनमा एकचोटी महान खेलाडी मेस्सी र अर्जेन्टिनाको खेल प्रत्यक्ष हेर्न सौभाग्य मैले पाएँ।
प्रकाशित ७ असार २०७५, बिहिबार | 2018-06-21 13:22:03
उदीप बरालबाट थप